VLC waa mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta ugu awooda badan oo soo bixi halkaas maanta. Sida waa il software furan, waxaa loo heli karaa lacag la'aan ah. Si ka duwan software badan oo lacag la'aan ah oo kale oo bixiya muuqaalada kooban ama aan lahayn, VLC ka taagan tahay ay u gaar ah.
Siyaabo badan, waxa ay aad uga wanaagsan ciyaartoyda warbaahinta premium yahay. Waxa ay taageertaa badan oo files warbaahinta iyo qaabab iyo Soha oo la xariirta si joogto ah si ay u awoodaan inay ku ciyaaraan wax walba. Tani waa sababta ay sii daayo xiga ee aad soo socda VLC ma ka badan dhawr bilood markiiba. Halkan waxaan ku eegi doonaa shanta qeybood oo ka weyn ee VLC on Windows iyo Mac.
Part1: Shan qoraalkii ka weyn ee VLC for Windows
Qeybta 2: Shan qoraalkii ka weyn ee VLC on Mac
Qeybta 1: Shan qoraalkii ka weyn ee VLC for Windows
Maqaallo: Waa version hore Weatherwax lahaa updates ugu waaweyn. Waxa ay u ogolaataa auto-wareeg ah videos laga soo qaaday telefoonka. Waxaa la iman muuqaalada resume cusub in ay sii wadaan ka barta meesha aad ka tagtay. Waxay leedahay taageero roon cusub HD codecs.
Maqaallo: Tani version cusub ee uu leeyahay ee muhiimka ah audio cusub, dekedda in mobile dhufto, hardware kelmadaha-Deji iyo taageero qaabab ka badan. Waxaa la hagaajinaysaa on versions hadda oo uu idin ​​wada siiyo socda-gen codecs taageero.
Maqaallo, Waxay leedahay si deg-deg multi-muhiimka ah GPU oo kale hardware . Waxay bixisaa taageero u qaabab xirfadeed, HD iyo codecs 10-bit. Twoflower waxay leedahay dhuumaha cusub haya'ad iyo muuqaal, sida diirada cusub si kor loogu qaado videos.
Maqaallo, version Tan waxaa la odhan jiray shandadaha ah. Software la sii daayay wwith kelmadaha GPU cusub oo ku saabsan GNU / Linux iyo kelmadaha DSP isticmaalaya VAAPI iyo OpenMax IL siday u kala horreeyaan. Waxay ku bixiyeen cusub ee la sii daayay Blu-Ray subtitles, MP4 sameecadda ah iyo VP8.
Maqaallo: Waxay ahayd software ugu horeysay in ka dhigay VLC caanka ah. In kasta oo ay ahayd horaantii version, waxa taageeray badan oo qaabab ka.
Haddii aad Mac ah, sidoo kale waxaad kala soo bixi kartaa VLC. Halkan waxa aad u baahan tahay inaad samayso.
Features: Waa version aasaasiga ah ee jooga version 2.2.1. Waxay bixisaa qaababka cusub sida auto-bed-version Mac, dib u bilaabi meesha aad ku hadhay qoraalkii oo dhan. Waxa kale oo ay taageeraan codecs HD cusub.
Maqaallo, version Tan waxaa loogu tala galay bixiyaan taageero fiican u aalladda-HD video la sireed cusub hardware iyo Deji. Waxaa lahaa tayada shaqo fiican, iyo taageero maamulka qalab. Waxay sugtaa ilaa 1000 cayayaanka in meeshaan qoraalkii ka weyn.
Maqaallo: Waxaa gebi ahaanba wuxuu diyaariyaa interfaces Mac iyo interfaces Wen. The uqaadineed badan interface kale si ay u fududaato in la isticmaalo. Laga soo bilaabo version this, VLC bilaabay taageero ka BluRay Saxannada bixinta.
Maqaallo: Waxaa soo hagaagtay taageero u MKV , iyo 7.1 channels codecs. Tani version sida codecs cusub sida subtitles Blu-Ray, VP8 iyo MPEG-4 losseless. Version Tani waxay waddaa HD videos dhakhso badan.
Maqaallo, version Tani waxaa loogu talagalay PowerPC iyo OS sida Tiger oo Leopard. Waxa uu ahaa ciyaaryahan qaab kala duwan in ku dhowaad taageeray oo dhan oo ka mid ah qaabab ee wakhtigaas oo ay ahayd in ka badan oo caan ah. Waxay leedahay fudud, interface user aasaasiga ah oo isugu soo diyaariyeen ee Customization.
> Resource > VLC > Shan Qaybaha waaweyn ee VLC